Fanampiana ireo manana marary: nametrahana farmasia eny amin’ny CTC-19 | NewsMada
Fanampiana ireo manana marary: nametrahana farmasia eny amin’ny CTC-19
Nanapa-kevitra hametraka toeram-pivarotam-panafody vonjimaika eny amin’ny CTC-19 ny holafitry ny farmasianina eto Madagasikara. Tafiditra amin’ny fanampiana ireo manana marary tsaboina izany. Misy ireo fanafody hafa ilain’ny marary toy ireo manana aretina mitaiza, mihinam-panafody mahazatra isan’andro sy ireo karazam-panafody hafa ilaina amin’ny fitsaboana izany. Ankoatra ireo fanafody fototra mitsabo ny covid-19 omena maimaim-poana eny amin’ny CTC. Efa mipetraka eny Soamandrakizay izany ny fivarotam-panafody. Toerana lavitra tsena sy farmasia eny an-toerana ka anisan’ny antony nametrahana izany.
Sahirana ny mpikarakara marary mitady farmasia hividianana fanafody ka antony hanorenena vonjy maika ny toeram-pivarotam-panafody eny amin’ireo CTC-19 mandray mararin’ny covid19 izany.
Voatery mifandamina ireo mpiandry marary amin’ny fividianana fanafody. Lavitra ny toerana ary manahirana ny fivezivezena. Ny marary rahateo mila fanaraha-maso akaika amin’ny fitsaboana ka hamaha indrindra ny olan’ireo mpiandry marary ny fametrahana toeram-pivarotam-panafody eny amin’ny CTC-19.
Efa natao ihany izao hetsika manokana izao nandritra ny andiany faharoa tamin’ny firongatry ny valanaretina tamin’ny taon-dasa. Ho hita ao amin’izany fivarotam-panafody manakaiky ny CTC-19 izany avokoa ireo karazam-panafody rehetra mety ilaina mandritra ny fitsaboana.